Train Travel France Archives | စာမျက်နှာ6၏ 11 | တစ်ဦးကရထား Save
သငျသညျလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ် likes သူမျိုးရှိပါသလား? သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး! ကျနော်တို့ဥရောပရဲ့အထင်ကရက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့မဟုတ်ဖီးအပေါ်ရှမ်ပိန်ရင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ထင်. ဤတွင်အကောင်းဆုံးအိမ်ခေါင်မိုးအချို့ရှိပါသည်…
ဥရောပတိုက်တွင်အတော်များများကမြို့ကြီးများလှပတဲ့နန်းတော်ရှိ (သို့မဟုတ်နှစ်ဦး) အဆိုပါခရီးသွားဧည့်အတွက်ဆွဲရန်. ဒါကြောင့်ဥရောပအတွင်းငါးအလှဆုံးဘုံဗိမာန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသဘောတူရန်ခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်. ဥရောပမှာတော့အလှဆုံး Palace ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးမှာကြည့်ကြပါစို့:…
ဘဝတစ်နှေးကွေးအရှိန်အဟုန်င် အကယ်. သင်ရှာနေ, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရုပ်ပုံ; လာဗင်ဒါ၏လယ်ကွက်, ရွာတစ်ရွာစတုရန်းအတွက်လေယာဉ်သစ်ပင်များအရိပ်အောက်မှာနကွောနှင့်သံလွင်ပင် ... တစ်ဦးကတနင်္ဂနွေနေ့လယ်စာ,acafe creme atasidewalk cafe coupled…
သင်၏နောက်အားလပ်ရက်အပေါ်အချို့သောထိပ်တန်းဗိသုကာကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေ? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဥရောပထက်မပိုကောင်းသောအရပ်ဌာနလည်းမရှိ. သငျသညျဂန္ထဝင်ဗိသုကာစတိုင်များကိုစိတ်ဝင်စားနေဒါမှမဟုတ်တချို့ပြောင်-လူသိများရတနာကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိမရှိ, သငျသညျဥရောပမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ. ကြည့်ကြပါစို့…
အဘယ်ကြောင့်လူတွေခရီးသွားတူအကြောင်းပြချက်များများရှိပါတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးကိုမကြာခဏစကားကိုနားထောငျနိုငျသူမြားကိုတစျခုမှာအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံများရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်. အဘယျသို့ခရီးသွားလာနိုင်အောင်လှပသောစေသည်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်. Adrenaline junkies…
ပြင်သစ်က၎င်း၏လှပသောမြို့ကြီးများနှင့်ကျော်ကြားအထင်ကရအဆောက်အကျေးဇူးတင်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်. တိုင်းပြည်တစ်အိပ်မက်က၎င်း၏ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားလိုရာခရီးနှင့်အရသာအစားအစာဖြစ်ပါတယ်. များစွာသောခရီးသွားဧည့်ပဲရစ်မှစုပြုံနေချိန်တွင်, တမြို့လုံးမကြာခဏအလွန်ထူထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, အထူးသဖြင့်…
သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကိုအကောင်းဆုံးနေသော၏သေချာမသိရှိပါက, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့. ဤဆောင်းပါးသည်ညာဘက်ယခုသင်ဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်တချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! We will give you detailed descriptions of each and how…
ဘယ်အချိန်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်၏ search အတွက်, သငျသညျသူတို့အား timeless အပိုင်းပိုင်းများအတွက်မြျှောအပေါ်မသာနေ. သင်တို့သည်လည်းမှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်းခရီးကိုယူပြီးနှင့်သမိုင်းရှာဖွေစူးစမ်းနေ. တစ်ဦးကစပျစ်သီးကိုစတိုးဆိုင်တစ်ဖက်ရှင်ပြတိုက်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည်, indicative ofacity’s culture…
သငျသညျရထားခရီးသွားနဲ့တူသလား? သငျသညျပြင်သစ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အတွက်အံ့သြဖွယ်ရဲတိုက်ကိုမြင်လျှင်နဲ့တူသလား? သောအမှုဖွင့်လိုလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာရာအရပ်ကိုရောက်ရှိပါပြီ. ဆိုလိုသည်မှာဤဆောင်းပါးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့င် “10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle” will give youadefinitive list of…